एसईईको परिक्षा कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ? मन्त्रालयबाट आयो यस्तो सूचना - Alert Khabar
Homeशिक्षाएसईईको परिक्षा कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ? मन्त्रालयबाट आयो यस्तो सूचना
एसईईको परिक्षा कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ? मन्त्रालयबाट आयो यस्तो सूचना
काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा मन्त्रालयले एसईई परिक्षा लकडाउन खुल्ने वित्तिकै सुरु हुने जनाएको छ । चैत २५ गते लकडाउन सकिएलगत्तै सरकारले गर्ने निर्णयपछि एसईई परीक्षाको नयाँ तालिका सार्वजनिक गरिने छ मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए ।
शर्माले परीक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई तनाव नलिई आफ्नो पाठ्यपुस्तक रिभिजन गर्न आग्रह गरेका छन । शर्माले भने, ‘अनावश्यक हल्लाको पछाडि नलाग्नोस् । सरकारको आधिकारिक धारणा उपयुक्त समयमा जारी हुनेछ ।’